Wefdi ka socda beesha caalamka oo maanta ku wajahan magaalada Kismaayo oo gashay xaalad… – Hagaag.com
Wefdi ka socda beesha caalamka oo maanta ku wajahan magaalada Kismaayo oo gashay xaalad…
Posted on 15 Agoosto 2019 by Admin in National // 0 Comments
Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo uu hoggaaminayo Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta ku wajahan magaalada Kismaayo oo gashay xaalad siyaasadeed oo iska soo horjeeda.
Sida wararku sheegayaan wafdiga uu hoggaaminayo James Swan ayaa la kulmi doona Madaxweynaha Jubbaland ee waqtigiisa dhamaaday, Guddiga doorashooyinka, Musharaxiinta mucaaradka.
Wararka ayaa sheegaya in xubnaha uu hoggaaminayo Mr James Swan ay dadaalo ku bixin doonaan sidii loo xalin lahaa xiisadda siyaasadeed, isla markaana loo abuuri lahaa hannaan doorasho oo ku dhaca jawi wanaagsan.
Wakiilada Beesha caalamka ayaa walaac ka qaba xaalada Kismaayo iyo dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda, taasoo horseedi kara fowdo iyo qalalaaso.
Safarka Mr Swan ayaa ah kii labaad oo uu Kismaayo ku tagi doono, iyadoo safarkan uu ka duwan yahay safarkiisii koowaad ee kormeerka ahaa, balse xilligan ayaa ku soo aaday waqti xasaasi ah.
Magaalada Kismaayo ayaa gashay xaalad siyaasadeed oo aan deganeyn, kaddib markii xubnaha Musharaxiinta mucaaradka ee aan is diiwaan gelin ay ku dhawaaqeen Xildhibaano labaad, halka Guddiga doorashooyinka Jubbaland ay iyana soo bandhigeen Liiska Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee Jubbaland, waxaana tallaabooyinkan iska soo horjeeda ay qarka u saaran tahay in maalmaha soo socda la doorto Labo Madaxweyne iyo labo Guddoon Baarlamaan.